Antigua neBarbuda Real Estate LOT-AG08
(Ugari hweAntigua neBarbuda yeTamarind Hills share)
Mugove weHotera yekuwana Citizenship yeAntigua neBarbuda
Kugamuchirwa kuTamarind Hills, nzvimbo yakasarudzika pachitsuwa cheAntigua.
Tamarind Hills iri padombo rakatarisana nekuvira kwezuva pamhenderekedzo inoshamisa yeAntigua kumadokero, pakati peDarkwood neFfries, maviri emahombekombe akaisvonaka pachitsuwa ichi. Apa ndipo panokwira humbozha kune inotevera nhanho. Iyi inoshamisa muunganidzwa wemisha yedzimba yakanyatsogadzirirwa gadziriro yemazuva ano uye yakashongedzwa yeCaribbean.
Tamarind Hills inopa akasiyana siyana emahombekombe egungwa uye dzimba dzepamberi pemahombekombe izvo zviripo zvekubhadhara. Misha yose ine dzimba dzega, dzakashongedzerwa zvakakwana makicheni eEurope uye dzimba dzekugezera, nzvimbo dzekuwachira nenzvimbo dzekudyira dzekunze kumatunhu epachivande ane zvivakwa zveBBQ. Concierge masevhisi anowanikwa pane saiti, pamwe neako wega chef nemusikana webasa, pamwe nekuhaya mota, VIP nhandare yendege services, uye kuchengetedza kweese ezvitsuwa maresitorendi uye kushanya. Mahara epamusoro-soro Wi-Fi uye tambo TV inowanikwa munzvimbo yese, uye kune zvakare yakavanzika mota park ine yakachengetedzwa dumba uye makamera.
Yakagara yakanangana pamusoro peGungwa reCaribbean, Stingrays Oceanfront Apartments akagadzwa zvakanaka 2, 3 uye 4-yekurara mafurati ane anoshamisa panoramic maonero, makuru akavhurika-kuronga nzvimbo dzekugara uye makuru materu. Ivo vari pahuriri huviri vane maonero akanaka. Yekutanga pekugara yapera, pamusoro chaipo peFfries Beach, ichipa maonero akajeka eimwe yemabhichi epasirese epasirese, sekureva kweCNN.
Iwe unotsika wakananga kune rakapfava jecha reCaribbean kubva kune yako yekumusoro villa muTamarind Hills. Kune maviri masitaira emisha, Barracudas uye Searays, ayo anopa panoramic ocean uye maonero egungwa.